December Born လေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ •
December Born လေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ
03/12/2019 Yan Naing ဗဟုသုတ 0
December born လေးတွေဟာ ရာသီခွင်အရ Sag i t tar i u s နဲ့ Cap r i c o r n ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာရှိနေပီး အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ထားနိုင်ကြသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီရဲ့ အအေးဆုံးအချိန်မှာ မွေးဖွားတဲ့သူများ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ စိတ်နေသဘောထား အေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီး သူတစ်ပါးအပေါ် စိတ်ဒုက္ခမပေးတတ်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့လေ. … ။
သူတို့ အပေါ် စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေကိုလဲ ရန်နဲ့ တုန့် ပြန်ခြင်း မပြုဘဲ သဘောထားစွာ ခွင့်လွှတ်သည်းခံပေးနိုင်ကြတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေလဲဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ထက် သဘောထားကြီးတဲ့သူတွေ လိုက်ရှာနေရင် ထီးဖြူပြီးဖိနပ်သာပါးသွားမယ် တွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူး..
ဒါ့အပြင် December Born လေးတွေဟာ ရိုးသားပွင့်လင်းကြပီး သဒ္ဓါတရားထက်သန်သူများလည်း ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဘဝမှာ နတ်သားလေးတွေ နတ်သမီးလေးတွေ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသူတွေလို့ လဲ သတ်မှတ်ခံထားကြရပါတယ်တဲ့ … ။
သူတို့ လေးတွေရဲ့ ဘဝမှာ တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာက သစ္စာတရား ဖြစ်ပီး မိမိအသက်ထက် သစ္စာတရားကို ပိုမိုတန်ဖိုးထားသူများလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဒီဇင်ဘာလမွေးဖွားတဲ့ ချစ်သူလေး ပိုင်ဆိုင်ထားပီဆိုရင်တော့ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက်လို့ သာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့နော် … ။
December Born လေးတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။ ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ စိတ်အလိုကိုလိုက်ပီး ဆုံးဖြတ်ခြင်းမလုပ်ကြဘဲ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ December Born အများစုဟာ မွေးရာပါခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ လူအများရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိနေသူများလည်းဖြစ်ပါတယ် … ။
နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် December Born လေးတွေဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမြင့်မားကြသူများဖြစ်ပါတယ် .. ။
December Born လေးတွေမှာ အပြစ်ပြောစရာဆိုလို့ လူတိုင်းအပေါ် မခွဲခြားဘဲ အရမ်းသဘောကောင်းလွန်းတာကြောင့် မကောင်းတဲ့သူအချို့ ရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို ခံရတာရယ် အလွန်သစ္စာစောင့်သိတတ်သူများဖြစ်တာကြောင့် သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့ အခါ ရူးမတတ် ခံစားသွားတတ်ကြတာလေးတွေ ပဲရှိပါတယ်တဲ့ .. ။
ဒါ့အပြင်December Born လေးတွေက ကံနိမ့်တတ်သူတွေ ဖြစ်တာမို့ ဘာသာရေးကို တခြားသူတွေထက် ပိုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ တခါတလေကျ မလိုအပ်ဘဲ ခေါင်းမာတတ်တာတွေ ရှုပ်ရှုပ်ပွပွနေတတ်တာလေးတွေ စတဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေသာ ပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဖက်ဖက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလေးတွေ ဖြစ်လာမှာ အမှန်ပါပဲနော် … ။
ကဲ .. အခုလအတွက် ရေပန်းစားရဲ့ ဒီဇင်ဘာလဖွား လေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲနော်။ နောက်လတွေမှာလည်း လအလိုက် စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးဦးမှာဆိုတော့ အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့မမေ့နဲ့နော်။ အခုပိုစ့်ကို လွတ်လပ်စွာ ဝေမျှ နိုင်ပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ချစ်သူဖြစ်ဖြစ် December Born လေးဆိုရင်တော့ လက်တို့ပြီး အသိပေးလိုက်ဖို့ ပြောလိုက်ပါရစေ … ။
December Born လေးတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားနဲ့ ထူးခွားတဲ့ အမူအကငျြ့လေးတှေ
December born လေးတှဟော ရာသီခှငျအရ Sag i t tar i u s နဲ့ Cap r i c o r n ရဲ့ လှမျးမိုးမှု အောကျမှာရှိနပေီး အရာရာကို အကောငျးမွငျစိတျထားနိုငျကွသူမြားပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆောငျးရာသီရဲ့ အအေးဆုံးအခြိနျမှာ မှေးဖှားတဲ့သူမြား ဖွဈတာနဲ့ အညီ စိတျနသေဘောထား အေးခမျြးတညျငွိမျပွီး သူတဈပါးအပျေါ စိတျဒုက်ခမပေးတတျသူမြားလညျးဖွဈပါတယျတဲ့လေ. … ။
သူတို့ အပျေါ စိတျဒုက်ခပေးတဲ့သူတှကေိုလဲ ရနျနဲ့ တုနျ့ ပွနျခွငျး မပွုဘဲ သဘောထားစှာ ခှငျ့လှတျသညျးခံပေးနိုငျကွတဲ့ စိတျဓာတျပိုငျရှငျတှလေဲဖွဈကွပါတယျ။ သူတို့ ထကျ သဘောထားကွီးတဲ့သူတှေ လိုကျရှာနရေငျ ထီးဖွူပွီးဖိနပျသာပါးသှားမယျ တှမှေ့ာတော့မဟုတျဘူး..
ဒါ့အပွငျ December Born လေးတှဟော ရိုးသားပှငျ့လငျးကွပီး သဒ်ဓါတရားထကျသနျသူမြားလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ နောကျဘဝမှာ နတျသားလေးတှေ နတျသမီးလေးတှေ ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားသူတှလေို့ လဲ သတျမှတျခံထားကွရပါတယျတဲ့ … ။
သူတို့ လေးတှရေဲ့ ဘဝမှာ တနျဖိုးအထားဆုံး အရာက သစ်စာတရား ဖွဈပီး မိမိအသကျထကျ သစ်စာတရားကို ပိုမိုတနျဖိုးထားသူမြားလဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့မှာ ဒီဇငျဘာလမှေးဖှားတဲ့ ခဈြသူလေး ပိုငျဆိုငျထားပီဆိုရငျတော့ ကံအကောငျးဆုံး လူသားတဈယောကျလို့ သာ ကိုယျ့ကိုကိုယျသတျမှတျလိုကျပါတော့နျော … ။
December Born လေးတှဟော သူတို့ ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို ကောငျးမှနျစှာ ထိနျးခြုပျနိုငျသူမြားဖွဈကွပါတယျတဲ့။ ကိစ်စရပျတိုငျးမှာ စိတျအလိုကိုလိုကျပီး ဆုံးဖွတျခွငျးမလုပျကွဘဲ ဖွဈသငျ့ဖွဈထိုကျ လုပျသငျ့လုပျထိုကျတာကို ခေါငျးအေးအေးထားပွီး ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးရှိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ December Born အမြားစုဟာ မှေးရာပါခေါငျးဆောငျကောငျးမြားဖွဈပွီး နယျပယျအသီးသီးမှာ လူအမြားရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိနသေူမြားလညျးဖွဈပါတယျ … ။
နောကျထပျကောငျးတဲ့အခကျြတဈခကျြအနနေဲ့ ပွောရမယျဆိုရငျ December Born လေးတှဟော စိတျကူးစိတျသနျးကောငျးပွီး ဖနျတီးနိုငျစှမျးမွငျ့မားကွသူမြားဖွဈပါတယျ .. ။
December Born လေးတှမှော အပွဈပွောစရာဆိုလို့ လူတိုငျးအပျေါ မခှဲခွားဘဲ အရမျးသဘောကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ မကောငျးတဲ့သူအခြို့ ရဲ့ အနိုငျကငျြ့မှုတှကေို ခံရတာရယျ အလှနျသစ်စာစောငျ့သိတတျသူမြားဖွဈတာကွောငျ့ သစ်စာဖောကျခံရတဲ့ အခါ ရူးမတတျ ခံစားသှားတတျကွတာလေးတှေ ပဲရှိပါတယျတဲ့ .. ။
ဒါ့အပွငျDecember Born လေးတှကေ ကံနိမျ့တတျသူတှေ ဖွဈတာမို့ ဘာသာရေးကို တခွားသူတှထေကျ ပိုလုပျဖို့ လိုအပျပါတယျနျော။ တခါတလကြေ မလိုအပျဘဲ ခေါငျးမာတတျတာတှေ ရှုပျရှုပျပှပှနတေတျတာလေးတှေ စတဲ့ မကောငျးတဲ့အခကျြလေးတှသော ပွငျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အဖကျဖကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့သူလေးတှေ ဖွဈလာမှာ အမှနျပါပဲနျော … ။
ကဲ .. အခုလအတှကျ ရပေနျးစားရဲ့ ဒီဇငျဘာလဖှား လေးတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားအကွောငျးကတော့ ဒီလောကျပါပဲနျော။ နောကျလတှမှောလညျး လအလိုကျ စိတျနစေိတျထားလေးတှကေို တငျဆကျပေးဦးမှာဆိုတော့ အမွဲစောငျ့ကွညျ့နဖေို့မမနေဲ့နျော။ အခုပိုဈ့ကို လှတျလပျစှာ ဝမြှေ နိုငျပွီး ကိုယျ့သူငယျခငျြးဖွဈဖွဈ ကိုယျခဈြသူဖွဈဖွဈ December Born လေးဆိုရငျတော့ လကျတို့ပွီး အသိပေးလိုကျဖို့ ပွောလိုကျပါရစေ … ။
လေဖြတ် လူနာများသို့ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ဆေးနည်း လေးပါ ။ လုံးဝ ပြန်ကောင်း ပါ တယ်
ယခု ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်ထက် ပိုပြီး အအေးပိုမယ့် နေ့ရက်များ
Hits Today : 4237
Total Hits : 1247842